Taorian’ny Namonoan’ny Manamboninahitra iray an’ilay “Mpisetrasetra Fantadaza”, 15 taona , Ny Paikan’ny Polisy Izao no Kendren’ireo Trinidadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2016 18:29 GMT
Fiaran'ny sampandraharahan'ny polisy ao Trinidad sy Tobago (TTPS). Sary an'i Taran Rampersad, nahazoana alàlana.
Mizarazara ny hevitra ao Trinidad sy Tobago momba ilay namonoan'ny polisy an'ilay zazalahy 15 taona, Josiah Ramsahai, tamin'ny 17 Novambra 2016 teo. Ireo manamboninahitra misisika milaza fa nitondra fitaovampiadiana ary nitifitra azy ireo ilay zazalahy talohan'ny nahafaty azy tao anaty fifanjevoana. Ny havan'ny maty kosa manambara fa novonoina izy.
Mifandray amin'izany dia nampiseho basy poleta 9mm ny polisy izay lazain-dry zareo fa nentin'i Ramsahai, ary ‘mpisetrasetra fantadaza’ no anondroan-dry zareo azy, satria efa nanana vesatra 13 hafa nanenjehana azy izy tany aloha tany, isan'izany ny hafatra, ny fitaovampiadiana ary ny fitànana zava-mahadomelina, sy fanolanana.
Isisihan'ny havany ny filazàna fa ‘raharaha notefena’ sy noforonina daholo ireny vesatra ireny. Nafahana avy any amin'ny fonja natao ho an'ny zaza tsy ampy taona i Ramsahai rehefa nandoa onitra, volana iray talohan'ny namonoana azy.
Nilaza ny fianakavian'ilay zazalahy fa nametraka fitoriana an'ireo polisy roalahy izay lazain-dry zareo fa nandrahona hatrany an'i Ramsahai hatramin'ny namotsorana azy, saingy nolazain'ny Police Complaints Authority (PCA), sampana mpandray fitarainana, fa tsy misy na inona na inona voarakitra momba izany any amin'izy ireo.
Mandritra izany, misy tatitra mampifanditra mikasika ilay tranga. Ny sasany amin'ny nanatri-maso nilaza fa tsy nampiasa fitaovampiadiana velively i Ramsahai, fa naleony nisafidy ny handositra ireo polisy; ny hafa milaza fa nitifitra ireo polisy izy, izay namaly tifitra sy voalaza fa nitifitra azy in-6 ka hatramin'ny in-17 teo.
Ilay famonoana dia nampipoitra indray ny olan'ny fahatokian'ny vahoaka ny polisy, izay mazàna no heverina fa maka ny lalàna ho eo am-pelatanan-dry zareo manokana. Tsy ela akory izay ny lehiben'ny polisy ao amin'ny firenena, Stephen Williams, no nilaza fa eo amin'ny 150 eo ho eo ireo polisy fatritran'olona no natsahatra tamin'ny asany noho ny fiahiahiana azy ireny tamina heloka bevava maro, tafiditra amin'izany ny famonoana olona.. Wired868 nanakiana hoe:
Fantatrareo tsara fa henjana mihoatra lavitra noho izay heverinareo ny olan'ny heloka bevava eto amin'ny firenenareo, miaraka amin'ny fahitàna fa nidiran'ireo mpanao heloka bevava gaigy lahy ny sampandraharahan'ny polisy mba hahalasa azy ireo ho matianina […] Heverin'Ing. Live Wire fa làlana iray tsara hampihenana ny heloka bevava ny fanaovana an-tsapaka tobin-dasantsy iray ka mandeha any ary mibeda ny olona rehetra noho ilay Lalàna miady amin'ny Fikambanan-jiolahy.
Ao amin'ny Facebook, nafàna ny fifankalozankevitra. Nitanisa ny fanentanana Black Lives Matter (Misy Vidiny ny Ain'ny Mainty) any Etazonia i Rhoda Bharath, tamin'ny fitenenana hoe :
Aty Trinidad, any Etazonia ihany no misy vidiny ny Ain'ny Mainty.
Nefa dia misy ao ny dingana araka ny lalàna.
Eto isika manana ireo mpandravarava izay mikaroka izay zavatra azony.
Ireo fanehoankevitra tamin'io tohivakana io dia niainga avy aminà mpampiasa Facebook iray nilaza hoe lasa tsy rototra intsony amin'ny herisetra ny fiarahamonina, ary tonga aminà iray hafa tsy mety resy lahatra hoe efa notezaina ny vahoaka mba “hipetraka sy handray ny Laza Oprah rehetra avy amina tanora iray jiolahimboto.”
Tohizan'ilay tohivakana, miaraka amin'ny mpaneho hevitra iray manindry ny teboka hoe “misy fahasamihafàny ny hoe tsy manantsiny sy ny hoe mpanao heloka bevava […] Ny olona tsy manantsiny novonoina dia vono olona no iantsoana azy…ireo mpanao heloka bevava novonoina dia rariny no fiantso azy.” Avy hatrany i Jere Blacks dia namaly:
Ny olana dia ny hoe “iza” no mandray fanapahankevitra hilaza hoe itsy dia mpanao heloka bevava na tsia.
Iray hafa mpaneho hevitra, Danielle Ifayemisi Frederick, no nanosoka hevitra hoe ao anatin'ny raharaha tahaka io dia miditra an-tsehatra ihany koa ny vola sy ny fifandraisana, nampiany hoe:
Zavatra mitovy ihany ny ataon'ny polisy sy ny media….samy manome tsiny ilay niharan-doza….misy fiampangàna mihantona ity iray ity[…] tsy misy fanamelohana, fiampangàna….ho antsika dia azo ampifamadihana toerana izy roa ireo ary manamarina ireo famonoana ivelan'ny fitsaràna….Tsy milaza akory aho hoe marina na diso, saingy ialako tsiny raha toa aho TSY maka ny tenin'ireo mpikambana mendri-panajàna ao amin'ny TTPS ho toy ny tenin'ny soratra masina !!
Ny tsy fahaizana miasa tamin'ny nanosorana ilay tanora ho tsy nisy hafa afa-tsy olona mampiahiahy koa dia fametrahana fanamarihana marikivy amin'ireo mpampiasa media sosialy. Vernal Damion Cadogan nanazava hoe:
Tsy ilay fitifirana no olana, ny olana dia ireo fomba fanao tsy matianina sy tsy misy firaharahiana ataon'ny polisy mampidina ny ain'olombelona ho amin'ny laharan'ny “mpisetrasetra fantadaza” sy ny fomba maharikoriko mahazatra ny olompirenena mitehaka ireny famonoana ireny alohan'ny hanombohana fanamarinana hoe nety sa tsia ilay famonoana, na filazàna ho fanta-bahoaka ireo antsipirihany rehetra momba ilay fitifirana ka hahafahana mihevitra toy izany.
Raha izao fizotra izao, dia nitifitra tanora iray Afro-Trini fotsiny ny TTPS ary nanosotra azy ho “mpisetrasetra fantadaza” ka ho faly ny vahoaka amin'izany satria eo ambany vahohon'ireo mpanao heloka bevava ry zareo [tsss].
Tsy inoako ny hisian'ny fanavotana ho an'i Trinidad miaraka amin'izao toetran'ny olompirenena mandrafitra azy ankehitriny izao.
Taty aoriana kely, nampiany hoe :
Ny ampahany tena mandreraka marina momba ireny fifanakalozankevitra ireny dia ny hoe hojeren'ny olona, ary ho adikany fankasitrahana ilay namoy ny ainy ary fanoherana ny TTPS [Trinidad and Tobago Police Service].ireo fanehoankevitra, toy ny ahy.
Iray naneho hevitra, milaza ny tenany ho manamboninahitry ny polisy, namaly hoe :
Teny efa fampiasa foana ny Mpifanolobodirindrina/vohitra Mpisetrasetra, ary hitako ho hafahafa raha tampotampoka eo lasa manana olana amin'izany ny vahoaka satria ilay izy resaka ankizy 16 taona [tsss]. Nahafantatra manokana io ankizy io ve ianareo? Izaho manokana, eny, ary tsy tambo ho isaina ireo manamboninahitra hafa ato anatin'ny distrika niresaka taminy momba ireo fanafihana nataony, indrisy tsy nanampy velively ny fianakaviana.
Efa nampanao fanadihadiana momba ilay famonoana ny Sampana mpandray fitarainana ao amin'ny polisy.